Clubhouse:- Walwalka Dhanka Amniga Ee Xogta Ku Jirto Bartan Ku Cusub Bulshada Internet-ka | Gaaroodi News
Clubhouse:- Walwalka Dhanka Amniga Ee Xogta Ku Jirto Bartan Ku Cusub Bulshada Internet-ka
Barta laga qabto doodaha codadka ah ee Clubhouse, waxay xaqiijiyeen in qof ka mid ah dadka isticmaala oo awood u yeeshay in uu wax ka soo baahiyo dhanka website-kooda.
Bartan waxay dadka isticmaala ku qabsan karaan doodo iyo wadahadallo cod ah – si gaar iyo si guudba – waa cod toos ah oo aan la duubi karin.
Baarayaasha dhanka amniga ee internet-ka waxay sheegayaan in ay heleen in qof ka mid ah dadka isticmaala barta uu codadka dhowr qolal uu toos uga daaray meel kale, dhammaadkii bishii la soo dhaafay.
Clubhouse ayaa xaqiijisay arrintaas, waxayna arrinta dhacday mar xog laga soo daayay goob aan la ogoleyn in qof kasta uu galo.
Shirkadda waxay wargeyska Bloomberg u sheegtay in qofkaas laga mamnuucay barta, haddana ay ku soo dareen barnaamijyo “amniga xoojinaya” oo ka hortagaya in wada sheekeysiga toos loo baahiyo.
Sidoo kale Clubhouse waxay BBC u sheegtay in baahinta ama duubidda cod uusan ogoleyn qofka hadlaya, ay tahay arrin xadgudub ku ah shuruucda barta.
Afhayeen u hadlay wuxuu sheegay: “Xilli dhammaadka isbuuca ahayd, shaqsi ayaa si kooban u baahiyay codadka dhowr qol oo uu u sii gudbiyay website-kooda.
“Cinwaankii shaqsigas ayaa la saaray mamnuucid abid ah, waxaana soo kordhinay barnaamijyo kale oo amniga xoojinaya si looga hortago in arrintaa ay dhacdo mustaqbalka”.
Warbixin uu soo saaray guddiga kormeerka ee jaamacadda Stanford, ayaa lagu xaqiijiyay dhacdadaas. Balse ninka madaxda ka ah, David Thiel wuxuu sheegay in faragelinta xogta ee dhacday aysan ahayn “jabsi ama dhac”.
Taa bedelkeeda, wuxuu tilmaamay in qof ka mid ah dadka isticmaala barta uu go’aansaday in uu jebiyo shuruucda iyo xeerarka barta.
Nin u dhashay Australia oo ka shaqeeya amniga internet-ka, Robert Potter, kaas oo ah ninka dhisay hannaanka difaaca Washington Post ayaa qabo arrin middaa la mid ah.
Wuxuu sharaxay in “kala daadsanaanta dhanka xogta” ay tahay arrin ka duwan “jabsashada ama u dhicidda xogta”.
U dhicidda xogta waxaa badanaa sameeya qof si ula kac ah u jabsado bar si uu xogta dadka u xado.
Balse arrinta ka dhacday Clubhouse waa dhacdo ah in xog qarsoodi ah ama gaar ah lagu baahiyay meel kale oo aan loogu talagalin. Clubhouse dhib kama jiro, keliya waa xadgudub kooban, ayuu yiri khabiir dhanka baraha bulshada amnigooda ka shaqeeya
Walwalka dhanka amniga ee Clubhouse
Dhacdadii amni ee Clubhouse waxay ku soo aaday xilli ay shirkadda xaqiijineysay in aysan jirin xog ay xadeen burcadda internet-ka ama kuwa ay dowlado ay adeegsanayeen – waxayna ka jawaabayeen qeybo ka mid ah warbixinta guddiga Stanford University, ee uu hoggaaminayo madaxiii hore ee Facebook u qaabilsanaa dhanka amniga, Alex Stamos.
Warbixintaan waxaa lagu sheegay in jaamacadda ay heshay dhowr dhacdo oo amni, sida in lambarka u gaarka ah isticmaalaha iyo lambarada gaarka ah ee qolalka Clubhouse ay sameeyeen in iyaga oo qoraal waadax ah la baahiyay, waxaana suuragal ah in ay la xiriiraan cinwaannada gaarka ah ee dadka.
Sidoo kale waxay cilmi-baarayaasha ka walwalsan yihiin in dowladda Shiinaha ay dhexgasho codadka ku duubmaya keydiyeyaasha Clubhouse. sababtoo ah, qalabka ay ku keydsan yihiin waxaa loo dhisay baahinta isla marka la hadlayo, waxaana laga qaaday shirkadda API oo sidoo kalena loo yaqaano Agora – taas oo xafiisyo ku leh Shanghai iyo San Francisco.
Agora waxay bishii June warbixin ku shaacisay wargeyska Wall Street, waxay sheegtay in ay dacwad u gudbineyso Laanta amniga Mareykanke ee dhanka Internet-ka (SEC).
Waxay dacwadda ahayd in Shiihaha uu uga baahan karo “in ay kala shaqeyso, ayna ka taageerto amniga bulshada iyo amniga qaran ee ay maamulka ku ilaalinayaan badqabka ama kaga hortagayaan burcadda”.
Stanford waxay bilowgii bishii February sheegtay in ay Clubhouse kala shaqeyneyso sidii amniga loo xoojin lahaa.
‘Wada sheekeysiga Clubhouse u arag sida nus-shaac in uu yahay’
Haddii ay walwal kugu hayso in wada sheekeysiga Clubhouse loo qaadan karo bannaanka ama meel ka baxsan barta, haddaba tani ma ahan arrin cusub.
Dadka waxayba billaabeen in ay duubaan codka ama muuqaallada qaar ee dadka caanka ah, ka dibna ay ku sii baahiyaan YouTube ama Facebook. Sawir laga qaaday muuqaal laga duubay Elon Musk wareysigiisii Clubhouse ee ka dib la sii baahiyay.
Markale, arrintan waa mid ka dhan ah shuruucda bartan, balse waa in qofna uusan filanin in hadalkiisa gaarka ah aan la sii baahin doonin, sida uu ka digay Mr Thiel.
“U arag in hadalka Clubhouse aad ku sheegto uu nuskii yahay mid shaacsan, iyadoo la eegayo arrinta Agora iyo xaqiiqada ah in qofkasta uu haysto mekarafoons,” ayuu bartiisa Twitter-ka ku qoray.
Mr Potter waxay la tahay in Clubhouse maadaama uu cusub yahay, ay jiraan dhibaatooyiin soo wajahaya.
“Waxaan dareemayaa in ay jiraan dad badan oo ka helay lana dhacay adeegga bartan, sababtoo ah waa wax cusub oo dadkana way ka helaan curinta cusub, balse waa in wadahadalka uu noqdo mid gaar ah oo aan shaacsanayn”, ayuu sheegay.
Wuxuu intaa ku daray in dadka macaamiisha cusub ah ay u baahan yihiin in ay gartaan xaqiiqada la xiriirta xogtooda.
“Waxay ila tahay in dadka ay u baahan yihiin in ay ogaadan in shaqsiyadda gaarka ah iyo amniga Internet-ka ee baraha bulshada ee cusub aysan ahayn arrimo isu wanaagsan.”
“Haddii aad tahay qof jecel in uu xilli hore ku biiro lana qabsado baraha cusub iyo barnaamijyada soo kordha, iyo telleefoonada casriga ah, haddaba ogow waxaa jiro burcad iyo xatooyo,” ayuu hadalka ku sii daray